Ciidamada Kumandoska ee Danab oo ka qeyb qaatay weerarkii Aw-dheegle – STAR FM SOMALIA
Ciidamadan ayaa qeyb ka ahaa Ciidamo Mareykan ah oo watay labo diyaaradood kuwa qumaatiga u kaca, kuwaasoo ku degay meel banaanka ka ah Aw-dheegle, isla markaana si lug ah ku gaaray goobo bartilmaameed ah.
Wararka ayaa sheegaya in illaa afar goobood oo saldhig u ahaa Al-Shabaab ay weerareen ciidamadan sida wada jirka ah uga qeyb qaatay howl galka.
Afhayeenka Ciidamada Mareykanka ee Africa Col. Mark Cheadle ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AP in ciidamadooda aanay wax xabad ah ridin, isla markaana ay ku sugnaayeen goob ammaan ah.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Kumandoska Soomaaliya ay dhanka la talinta iyo diyaaradaha ka taageerayeen, ayna howl galka si guul ku jirta uga gaareen sida uu yiri.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in howl galkaas lagu dilay illaa 15 ka tirsan Al-Shabaab, ayna jiraan illaa lix ruux oo gacanta lagu dhigay, horayna ay ciidamada u wateen.